आफुले कमाएको पैसा र सिप मुलुकमै खर्च गरे नेपालमै प्रशस्त सम्भावनाहरु छन्: मासाको तनाका - Pardeshi Khabar
प्रा. डा. मासाको तनाका
प्रा. डा. मासाको तनाका नेपालीहरुमाझ नौलो नाम होईन। उनी एक जापानी नागरिक भएपनि नेपाल र नेपालीहरुसंग घनिष्ठ छिन् । र औसत नेपालीहरुले भन्दा नेपाल र नेपालीहरुको बारेमा धेरै बुझेकी छिन् भन्दा फरक नपर्ला । पूर्वको पाँचथर देखी पश्चिमको कन्चनपुर सम्म ४० वटा जिल्लाहरुमा मात्र होईन, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको बारेमा पनि अनुसन्धान गर्नु पुग्नु भएको छ ।
आफ्नो मातृभाषा जत्तिकै नेपाली भाषा पनि खरर्र बोल्न, पढ्न र लेख्न सक्ने मासाको सोफिया युनिभर्सिटी टोकियो, जापानमा ग्लोवल माईग्रेसन स्टडिजको अध्यापिका पनि हुनुहुन्छ ।
नेपालीहरुले आफ्नो कमाई र सिकेका सिपहरुको आफ्नै मुलुकमा सदुपयोग गरे नेपालमा प्रशस्त सम्भावनाहरु रहेको वहाँको बुझाई रहेको छ ।
कुवेतमा वैदेशिक रोजगारीमा आएका नेपालीहरुको बारेमा अध्यायन गर्न आउनभएकी उनै मासाको तनाकासंग गरिएको कुराकानी जस्ताको त्यस्तै प्रकाशित गरिएको छ ।
– म मार्च २२ मा कुवेत आएको हो । वैदेशिक रोजगारीको सिसिलामा नेपालीहरु पुगेको जापान, मलेसिया र कुवेतमा म अहिले अध्यायन गर्दैछु र त्यसैको सिलसिलामा म कुवेत आएको ।
यहाँ कुवेत आउनु भएको पहिलो पटक हो?
– होईन दोस्रो चोटी हो ।
तपाईंलाई नेपालीहरुको बारेमा अनुसन्धान गर्ने ईच्छा चाँही कसरी भयो नि?
– मैले नेपालीहरुको बारेमा अनुसन्धान सुरु गरेको २०१४ देखी हो। त्यतिखेर देखी जापानमा नेपालीहरुको संख्या धेरै बढेकोले मैले अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।
तपाईंले जुन हिसाबले नेपालीहरुको बारेमा बुझ्नु भएको थियो, यहाँ आएर त्यस्तै पाउनु भयो कि फरक?
– मैले बुझेको कुरा भन्दा, नेपालीहरुको सोचमा खाडी मुलुक जाँदा खेरी केटीहरु घरको काम र केटाहरु त्यति मात्र आईडिया थियो। जापान जाँदा विध्यार्थीहरु भनेर त्यति मात्र आईडिया थियो । तर त्यस्तो होईन नि, जुन डेस्टिनेसनमा पनि प्रोफेसनल मान्छेहरु पनि काम गर्नु हुन्छ । पैसा नपाएको मान्छे पनि हुनुहुन्छ । त्यस कारणले जान्न जाने भन्ने कुरा भन्दा, गएको ठाउँमा के के गरेको भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ ।
तपाईंले यहाँ कुन कुन लेभलमा काम गर्ने नेपालीहरु भेट्नु भयो?
– म यहाँ ५/६ दिन मात्रै भएको कारणले सबैसंग भेट्न सकिएन । सुरुमा घरको कामको लागि आए, तर पछी अफिस खोलेको अथवा आफ्नो पसल खोलेको, सेल्स लेडीहरु, चौकीदारको काममा आएर सुपरभाईजर, को-अर्डिनेटर, म्यानेजर भएका सम्म पनि भेटें । अनि अर्को कुरा सुरु देखी अहँले सम्म एउटै काममा मान्छे त अहिले सम्म भेटेको छैन ।
स्पोन्सरहरुबाट पीडित भएकाहरुलाई पन् भेट्नु भयो कि?
– मैले एकदम जोखिम अवस्थाको साथीहरुसंग त भेट्न पाएन । तर कुरा त सुनेको छु । अनि मलाई पनि भेट्न एकदम मन लागेको छ । तर अन्फर्चुनेट्ली सिधा भेट्न त सकेन ।
तपाईंको कुवेत वसाईको अनुभव चाँही समग्रमा कस्तो रह्यो?
– त्यो त राम्रो लाग्यो । साथीहरुले एकदमै सहयोग गर्नुभयो ।
जापान गएपछी नेपालीहरुको लागि नयाँ केही गर्ने सोच बनाउनु भयो कि?
– यो तीन वर्षको अनुसन्धान प्रोजेक्ट हो। यसरी म तपाईंहरुको (कुवेतको), जापानको र मलेसियाको डेटा कलेक्सन गरेर त्यो बिश्लेषण गर्छु ।अनि मेरा साथीहरुको पौरखी नेपाल भन्ने वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको दिदीबहिनीहरुले खोलेको संस्थामा अहिले कुवेत, मलेसिया र जापानबाट फर्केको साथै साथमा आफ्नो परीवारको सर्भे पनि चाँडै गर्दै हुनुहुन्छ ।त्यसकारण त्यो पनि विश्लेषण गरीसकेपछी मात्रै रिपोर्ट बनाउँछु ।
तपाईंले यहाँ आएर नेपालीहरुको कमजोरीको बारेमा त्यस्तो केही बुझ्नु भयो ?
– नेपालीहरुको मात्र कमजोरी भनेर त भन्न सक्दिन । सबै काममा आफ्नो अगाडी अनि बाहिर आएका मान्छेहरुको त अधिकार पनि फरक हुन्छ नि। जस्तै – तपाईंहरु भोट हाल्न सक्नु हुन्न। त्यसकारणले आफ्नो अधिकारको खोजिमा हिड्न नसकेर गाह्रो भएको कुरा त सबै ठउँमा उस्तै छ । म नेपालमा वस्दा पन् त्यस्तै हो नि होईन र? तर के भन्न सकिन्छ भने, नेपाल भित्रमा अहिले ३३ प्रतिशत चैं महिलाहरुको रि-प्रिजेन्टेसन छ । तपाईंहरुको राष्ट्रपति पनि महिला र अन्य ठाउँमा पनि महिला हुनुहुन्छ । अनि यहाँको कम्युनिटीको जस्तै: बिभिन्न संघ संस्थाको अध्यक्षहरुको नेमलिष्ट त छ तर महिलाको पिजेन्टेसन त्यति देख्दैन। त्यसकारणले यदि तपाईंहरु महिला स्वयमसेवी अनि अरु सहयोग गरेको महिलाहरु पनि थुप्रै हुनुहुन्छ नि, त्यसकारणले महिलाहरु पनि त्यसमा अगाडी आउनुभयो भने झन राम्रो हुन्छ ।
रेमिट्यान्सको बारेमा तपाईंले पैसा मात्र रेमिट्यान्स होईन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, खास के हो प्रष्ट पारीदिनुस् न ?
– सोसियल रेमिट्यान्सको कुरा नेपालीमा भन्न गाह्रो भएकोले ईङलगसमा भन्नु पर्यो ।रेमिट्यान्स भन्ने बित्तिकै हजुरले भने जस्तै पैसाको मात्रै कुरा आउँछ, तर कमाएको पैसा बाहेक कुवेतमा आईसकेपछी सरसफाईको कुरा, आफ्नो सेफको कुरा, अरबिक भाषा पनि होला । बिभिन्न किसिमका नयाँ नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ नि, अनि त्यो कुरा आफै बस्दा खेरी, परीवारलाई पनि सिकाउनु हुन्छ कि ? फर्केर आफ्नो बिजनेसमा युज गर्नु हुन्छ कि? त्यसको आवश्यकताको कुरा सोसल रेमिट्यान्स भन्छु ।
तपाईं नेपाली राजदूतावास पनि जानुभयो त्यहाँका कर्मचारीहरुबाट कत्तिको सहयोग पाउनुभयो ?
– हामी खाली १ घण्टाको मिटिङ मात्र हो । पछी मैले सोधेको तथ्यांक दिन्छु भन्नुभएको छ ।
अब तपाईं फेरी कुवेत आउनुहुन्छ?
– म सुरुमा डेटा सबै विश्लेषण गर्छु। गरेर सबै मेरो साथीहरुलाई बताउँछु । मौका मिल्यो भने २ वर्ष पछी आउँछु ।
तपाईं नेपालमा चाँही कति बस्नु भयो?
– १० वर्ष ।
नेपालमा पनि लामो समय बस्नु भएको रहेछ, कुन कुन ठाउँमा बस्नुभयो?
– ललितपुरमा ।
ललितपुर बाहेक पनि तपाईं गाउँहरुमा जानुभयो होला, त्यहाँको कल्चरहरु हेर्नुभयो होला, कस्तो लाग्यो त तपाईंलाई नेपाली कल्चरहरु?
– त्यो कस्तो लाग्यो भनेर एक शब्दमा भन्न त धेरै गाह्रो हुन्छ । किनभने मैले गएको पनि पूर्व ताप्लेजुङ देखी कन्चनपुर सम्म थुप्रै ठाउँमा गएको छु । त्यसकारण म के भन्न चाहान्छु भने, मैले ७५ जिल्लाको ४० वटा जिल्लाको बिभिन्न ठाउँमा बसेको छु । बिभिन्न कास्टको मान्छे पनि भेटी सकें तर म कुरा गर्दा खेरी नेपाली साथीहरुले त्यस्तो घुम्नुभएको छैन । धेरै मान्छेहरुलाई मैले कुरा गर्दा खेरी धेरै मान्छेहरुले त्यसरी घुम्नुभएको छैन । त्यसकारण वैदेशिक रोजगारीमा मात्र ध्यान दिनुभन्दा पहिले आफ्नो देश घुम्नुस् न भन्न चाहान्छु ।
नेपालमा रोजगारीको अवसरको अभावले नेपालीहरु रोजगारीको निम्ति बिभिन्न देशमा जाने गर्दछन्, तपाईंले नेपाल भित्र चाँही कत्तिको सम्भावनाहरु देख्नुभयो त?
-नेपालमा धेरै अपर्च्युनिटी छ नि, तर मान्छेहरुले छैन भनेको मात्रै हो । जस्तै उदाहरणको लागि म बंगलादेशमा पनि लामो समय काम गरें । मान्छे पनि चिन्छु । अनि दुईटै देशको कम्पेयर गरेर हेर्छु । १९९० तिर जापानमा थुप्रै बेङ्गालीहरु बसेको थियो । अहिले बेङगालीहरु त्यति आउनु हुन्न । अनि धेरै मान्छे फर्केर क्युरो फ्याक्ट्री लगाउनुभएको छ । धेरै ईन्डस्ट्रीमा धेरै राम्रो भएको छ । उनीहरुको देश त स्रोतको हिसावले धेरै कमजोरी हो नि होईन? किनभने जग्गाहरु एकदम सानो छ, प्लट धेरै छ । अनि उनिहरुको टुरिजम सेक्टर त झनै छँदै छैन । अनि अहिले फेरी सेक्युरिटीको कुरा पनि धेरै बढेको छ। तर त्यहाँ जापानको ईन्भेष्टमेण्ट, जापानको कम्पनी अराउण्ड १५० छ हेर्नुस्, होईन? त्यसमाथि बंगलादेशका मान्छेहरुले आफै खोलेको उध्योगहरु त धेरै छ नि होईन? अनि त्यो दुईटा देशको सिनारियो हेर्दा खेरी नेपालको साथीहरुले आफै छैन भन्नु भन्दा त रोजगारी त आफै बढाउनुस् न भन्न चाहान्छु ।सुरुमा बेङगालीहरु यति धेरै बाहिर आउँथे, अहिले मेरो बिचारमा पहिले जस्तो त्यति जानुहुन्न । एजुकेसन भएको मान्छे विदेश जानुभन्दा आफ्नो देशमा अपर्च्युनिटी छ भन्ने थाहा भईसकेकोले फर्केपछी सोसल रेमिट्यान्स युज गरेर धेरै राम्रो बिजनेस पनि गर्नु भएको छ । तर मैले हेर्दाखेरी जापानबाट नेपाली फर्केर कोही कोहीले काठमाण्डौंमा राम्रो हस्पिटल खोल्नुभएको छ । तर अरु साथीहरु नेपाल फर्केर त्यति राम्रो भएन, फेरी क्यानाडा जाने, अर्को देशमा जाने कुरा गर्नुभएको छ । आफै कमाएको पैसा अरुको देशमा लगानी गरेको छ । त्यो मलाई त्यति ठिक लागेन ।
जापान मै चाँही नेपालीहरु कति छन् र उनीहरुको अवस्था कस्तो छ?
– हाम्रो सरकारी तथ्यांकमा ६७ हजार नेपालीहरु छन् । तर त्यो भन्दा माथि अनडकुमेण्ट मान्छेहरु पनि छन् । त्यसकारण ७० हजार जति छन् । कुवेतको नेपाली जस्तै भनौं न ।
अनि उनीहरुको सबैभन्दा लार्जेस्ट ग्रुप भनेको विध्यार्थीहरुको छ । विध्यार्थी पनि लार्जेस्ट ग्रुप भनेको डिग्री पढ्ने होईन ल्याङ्ग्वेज ग्रुपको भिसा हो । अनि उनीहरु एकदमै जोखिम अवस्थामा छन्, किनभने फिस तिरेन भने भिसा क्यानसिल हुन्छ । फिस तिर्नुको लागि काम गर्नु पर्यो । काम हप्तामा २८ घण्टा मात्र भएकोले खानको लागि मात्र पुग्छ, फिसको लागि पुग्दैन । त्यसकारणले उनिहरु अब त्यो २८ घण्टा भन्दा बढी काम गर्यो भने ईलिगल हुन्छ होईन ? अनि धेरै मान्छे ईलिगलमा पनि बसेका छन् । अनि फेरी ईलिगल बसेको कुरा स्कूलले थाहा पायोभने भिसा क्यानसिल हुन्छ । त्यसकारण उनिहरुको अवस्था एकदम नाजुक र गाह्रो भएको छ ।जापानमा नेपाली कल्चरहरु देखाउने सामाजिक संघ संस्थाहरु खोल्ने सरकारबाट छुट छ कि छैन?
– सरकारबाट त त्यस्तो केही पनि छैन, तर आफै गर्न सक्छन् ।
अनि जापानमा नेपालीहरुको लागि रोजगारीको अवसर कत्तिको छ ?
– खासै छैन । कुकको भिसामा मात्र आउन पाउँछन् । त्यसपछी कुकमा आएपछी अरुकाम गर्न पाईदैन । तर अब केयर गिभरको लागि नेपालबाट तालिम प्राप्त, सर्टिफिकेट भएको र जापानी भाषा जान्नेहरुलाई रोजगारी दिने तैयारी गर्दैछौं ।
« प्रम प्रचण्डको चीन भ्रमणका बारेमा के भन्छन् चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ? (Previous News)
(Next News) उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा महाधिवेशन उद्घाटन गर्न मलेसिया जाने »
सुनुवार सेवा समाज कुवेतको अधिवेशनको मिति सर्यो, अधिवेशन नोभेम्बर १० मा हुने
सुजन केसी आफ्नो उम्मेद्वारी घोषणा गर्दै (भिडियो)
एघार बुंदे प्रतिवद्दता जारी गर्दै सुजन केसीद्वारा मध्यपूर्व उपसंयोजकमा उम्मेदवारी घोषणा
निर्बाचन, तामाङ र ताम्सालिङ
वसन्तिलाई किङ गायक राजेश पायल राईसंग ड्युएट गीत गाउने रहर
किम जोङ–उनलाई भेट्ने ट्रम्पको चाहना, भेट्न पाउनु सम्मानको कुरा
प्रवासी कल्याण कोष कतारद्वारा मृगौला पिडित सीता खुलाललाई १ लाख ४६ हजार रुपैयाँ सहयोग
कतारमा हक्कु पक्कु सार्वजनिक
नेपाली सेवा समाजद्वारा साउदीमा नयाँ वर्ष विशेष कार्यक्रम सम्पन्न
भारतले दिएको सिमा अनुसार प्रक्तिव्यक्ति साढे ४ हजारका दरले भारु साट्न निर्देशन
तामाङ घेदुङ इजरायलको तेस्रो अधिबेशन अगमी मे १२ मा हुने
स्याङ्जा सहयाेग समाज कतारकाे छैटौं अधिबेशन सम्पन्न
एन आर एन ए साउदीद्वारा नेपालको दुर्गम बिद्यालयमा रु. एक लाख अक्षय कोष स्थापना गर्ने घोषणा
युएईमा अपाङ्ग तथा अनाथ बालबालिकाको सहयोगार्थ सास्कृतिक साँझ २०७४ हुने
अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज (नयाँ शक्ति) प्रवास संगठन कुवेतको अधिवेशनको स्थान परिवर्तन अब राजधानी रेस्टुरेन्ट खैतानमा
लालीगुराँस सास्कृतिक परिवारको दशैं बिशेष सांगीतिक कार्यक्रम तथा तेस्रो अधिवेशन एकैसाथ सम्पन्न
कुवेतमा संविधान दिवस भव्य रुपमा मनाईयो, सय भन्दा बढी मुलुकका राजदूतहरुले जनाए सहभागिता
उत्पिडित जागरण अभियान समाजद्वारा बाढिपिडितका लागि राहत बितरण
चुनावको पुर्वसन्ध्यामा एमाले र माओवादी कार्यकर्ताबिच झडप: एकको मृत्यु
सन्ध्या गुरुङको लागि लुम्बिनी समाज कुवेतको १ लाख १७ हजार सहयोग
नेपाल कुवेत सरोकार समाजद्वारा समीक्षा तथा बनभोज कार्यक्रम हुने
तमू समाजद्वारा रक्तदान कार्यक्रमको मिति परिवर्तन, आगामी रक्तदान सेप्टेम्बर १५ मा
२५६१ औं वुद्द जयन्तीका प्रमुख अतिथि मोहन गोले र अतिथि कलाकारहरुको विमान्स्थलमा भव्य स्वागत
उभौलीमा चर्चित कलाकारहरु राजेश, विल्सन र एलिशाको साकेला गीत सार्वजनिक (भीडियो सहित)
दोर्जे दाइको मायाँ र मैले जितेको चुनाव: शित्तल थोकर तामाङ
कविता ==“मजदुर दिवस´´
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतका संघसंस्थाहरुले युएईमा संयुक्तरुपमा बुद्ध जयन्ती मनाउने
गायिका मुना थापामगरको स्वरमा 'लगाऔं छिनो फानो'को म्युजिक भीडियो सार्वजीनिक (म्युजिक भीडियो)
दिपक राई वान्तवाको 'तिमीलाई नै' गीतको म्युजिक भीडियो सार्वजानिक
द्वन्द्व शुरु भो ! प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा फैसला दिने न्यायाधीशलाई ३ महिना जेल हुने
स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनमा महिलाका भागमा प्राय: उपप्रमुख
प्रचण्डलाई यसरी नैतिक संकटमा पारेर राजीनामा गराउने तयारीमा थिइन् सुशिला कार्की
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई शीतलनिवास बोलाइन्
संसद वैशाख २१ गतेसम्मका लागि स्थगित